Izindaba - Ungayikhetha kanjani i-blade ukuze iphumelele
1. Bheka ukushisela kwensimbi yesaha. Ingxenye exhunywe ne-alloy nomzimba we-blade akufanele iphuzi kakhulu njengethusi. Azikho abathengisi bamanga. I-solder kufanele ibe mhlophe ngandlela thile, ngomugqa omncane, ihlanzeke kakhulu. Akukho ukugqwala kwethusi okuluhlaza okotshani.
Kuhlobene nokuphepha, awufuni izindwani zensimbi ezindizayo lapho usika izinkuni. Inamandla njengesibhamu esincane.
Ungayikhetha kanjani i-blade ukuze iphumelele?
2.Bheka i-saw blade ebukhali, kunezinhlangothi ezine ezicijile, izinhlangothi ezimbili, ubuso bezinyo langaphambili, indawo ephezulu.Ukugaya bushelelezi, akukho concave ne-convex, ukuvumelana okuhle, i-blade winger .Ubuso bukhanya. Akukho ukuvuza noma okungagqokiwe. Futhi izonamathisela i-sawdust esakeni nge-front ephezulu nangemuva eliphansi.
3. Uma ubheka ingaphezulu lomzimba wefilimu, umphumela wokupholisha kufanele waziwe yiwo wonke umuntu.Ubushelelezi bokuqina kokungqubuzana buphansi, akulula ukunamathela izingcezu zezinkuni nokunamathisela izinkuni.Ukubukeka kuhle.Kungalinganiswa bheka indiza, ayikwazi ukungalingani njengesitsha.
4. Uma izimo zivuma, ungafaka isaha emshinini bese uhlolwa. Uma kungekho msindo noma kungekho jika lapho kwenziwa idling. (Qaphela ngalesi sikhathi) Jikela kancane ngesandla sakho, ulinganise i-runout radial.
Ngokuqondene nezindlela zokuhlola ezingochwepheshe, bathembela kuphela kwimishini namathuluzi wokulinganisa ukwenza ukuhlolwa okujule ngokwengeziwe. Izindwangu zokubona ezithunyelwa ngaphandle ziyizimbobo eziphakathi kuka-15.88mm no-25.4mm, kanti ishaft yasekhaya ibukeka ingama-20 noma i-18. Uma ufuna umphumela omuhle wokusika, ama-intshi ayisikhombisa angathenga amazinyo angama-40 noma ama-60, asike ngamasentimitha ayi-7 noma ayi-24 amazinyo angama-intshi angama-intshi angama-24, amazinyo angama-40 angasetshenziselwa ukusika, kungasetshenziswa ngokunemba isaha, amazinyo angama-80 noma amazinyo ayi-100.
Intambo enhle yesika ingasika kangcono kunendawo ehleliwe, kungabikho mabhulashi emaphethelweni, ikakhulukazi uma izinkuni zigawulwa kanzima. Kuhle lokho!
Isikhathi Iposi: Jan-13-2021
IKhabinethi Yamathuluzi Wokhuni, Izinsimbi zomzila ze-CNC, CNC Machine Amathuluzi, Amathuluzi kaRobin Wood, Izinhlelo Zekhabhinethi Zamathuluzi Wokhuni, CNC Bits,